Novonoin’ny mpandoto rindrina antserasera ve ilay Japoney bilaogera malaza manam-pahaizana ara-piarovana aterineto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2018 5:20 GMT
Fukuoka Growth Next, foiben'ny vondrom-piarahamonina startup no toerana namonoana an'i Hagex. Pikantsary tao amin'ny YouTube
Ny 24 Jona 2018, bilaogera Japoney fanta-daza iray no maty voatsindrona antsy tao Fukuoka Growth Next, fikotrehana toerana fiarahana miasa sady startup teknolojika ao andrefan'ny tanànan'i Fukuoka. Fantatra fa hanao lahateny momba ny fomba hiatrehana ny fanorisorenana an-tserasera ilay niharam-boina, Okamoto Kenichiro. Kanefa dia novonoin'ny olona voalaza fa mpandoto rindriny manokana izy.
Niasa ho mpanolo-tsaina momba ny fiarovana antserasera sady mpanoratra ihany koa i Okamoto – izay fantatra koa amin'ny famantarana azy somary miafina hoe Hagex. Saingy tahaka an'i Hagex, niharan'ny fanorisorenana nandritra ny taona maro nataon'ny mpandoto rindrina antserasera antsoina hoe Teino Sensei (Atoa Adala), heverina fa ilay lehilahy nitsongo dia azy mivantana sy namono azy izy:
Famonoana olona tao amin'ny foiben'ny startup Fukuoka Growth Next (ny sekoly fanabeazana fototra Daimyo taloha). Heverina ho ilay bilaogera malaza Hagex, 41 taona no niharam-boina.
Tao amin'ny bilaoginy malaza sy mavitrika, nampiroborobo ny fandraisam-pitenenany ho avy ao Fukuoka Growth Next, toerana birao startup teknolojika iray ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra nohavaozina tsara tarehy i Okamoto, mampiasa ny lazany antserasera. Miaraka amin'ny iray amin'ireo mponina tanora indrindra ao Japana, manome kalitaom-piainana ambony raha oharina amin'i Tokyo i Fukuoka izay nivoatra vetivety ary nahatonga azy ho “tanàna startup tato anatin'ny taona vitsy, manome fandrisihana mba hanintonana mpandraharaha ara-teknolojia sy hampitomboam-bokatra ny toekarenan'ny teknolojia ao Japana.
Ny lahatenin'i Okamoto dia natao hanomezana fitaovana fiarovana antserasera ho an'ny vondrom-piarahamonina teknolojian'ny Fukuoka, saingy noho ny loza mahatsiravina avy amin'ny lahatra, tsy voaantoka ny fiarovana azy manokana. Araka ny tati-baovao, raha nandeha tao amin'ny toeram-pivoahana ao amin'ny Fukuoka Growth Next i Okamoto, dia voatsindrona antsy imbetsaka; Nodimandry tany amin'ny hopitaly ny harivan'io i Okamoto avy eo.
Nivoaka lohateny lehibe manerana ny firenena tany Japana ity famonoana ity. Mandra-pahatonga ny fandraisam-pitenenany tao Fukuoka, olona vitsy – raha misy – no nampifandray an'i Hagex sy Okamoto ho olona iray ihany. Voalaza fa nanao asa tsara tamin'ny fanafenana ny mombamomba azy antserasera i Okamoto:
Nisy vono olona tao amin'ny Growth Next (Sekoly Ambaratonga fototra Daimyo taloha. Ilay niharam-boina dia olona iray antsoina hoe Okamoto Kenichiro, saingy rehefa nanao fikarohan-tsary, dia toa mitovy amin'i Hagex izy.
Ny alin'ny fanafihana, misy olona iray milaza fa Teino Sensei izay niaiky ny heloka vitany tamin'ny fahafatesan'i Okamoto tamin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra antserasera. Ny ampitson'iny, lehilahy iray teo an-toerana antsoina hoe Matsumoto Hidemitsu no nitolo-tena tao amin'ny tobin'ny polisy ao Fukuoka, ka namoaka antsy feno rà tao amin'ny kitapony izy. Reny ny toerana hanaovana ny lahatenin'i Okamoto, ary niandry tao amin'ilay tranobe izy mba hanafika azy. Nitatitra i Asahi Shimbun taty aoriana fa nilaza tamin'ny polisy i Matsumoto fa “nanana lolom-po tamin'i [Okamoto]” izy noho ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny aterineto” ary “nihevitra ny hamono azy”.
Na dia tsy voamarina amin'ny fomba ofisialy aza izany, taorian'ny famonoana, dia heverina fa i Matsumoto ihany no Teino Sensei, izay matetika mandoto rindrina sy miherisetra amin'i Okamoto sy ny hafa ao amin'ny Hatena, sehatra famahanam-blaogy sy tambajotra ara-tsosialy izay malaza tanteraka eo amin'ny zana-kolontsaina teknolojia Japoney.
Ahitana mari-pitadidiana sosialy malaza ny tranonkala izay ahafahan'ireo mpisera ny Hatena hanisy marika sy hifanakalo hevitra amin'ny mari-pitadidiana. Tamin'ny alalan'ilay lazaina fa momba azy antserasera, nanararaotra an'io endri-javatra io i Matsumoto tamin'ny fampiasana anarana maromaro mba hi-spam mpiserasera Hatena maro – anisan'izany i Okamoto – ary manao izay hampananosarotra ny fampiasana ny tolotra mari-pitadidiana. Mampiasa fanehoan-kevitra feno fankahalana sy fanevatevana, namadika ny spamming ho fandotoana rindrina goavana i Matsumoto.
Rehefa manoratra an-tserasera amin'ny anarana Hagex, namaly tamin'ny fomba mahazatra, mananihany an'i Teino Sensei i Okamoto. Manara-maso ny fihetsika mihoa-pefy ataon'i Teino ao amin'ny aterineto ihany koa i Hagex, ary nandrindra ny ezaka fanaraha-maso sy fanakanana ny kaontin'ny mpiserasera mpandoto rindrina rehefa fantatra izy ireo. Tamin'ny lahatsoratra bilaogy tamin'ny 4 Mey 2018, nanazava ny fomba namoronan'i Matsumoto famantarana antserasera vaovao mba hanorisorenana ireo mpisera Hatana i Okamoto:
Misy ny mpandoto rindrina iray antsoina hoe Teino Sensei. Mampiasa sary Fanjohiana fanondroana (famantarana Hatena), nahavita nandoto ny rindrin'ireo mpiserasera hafa marobe hatrany izy. Mazava ho azy, fa voafafa avy hatrany ny kaontiny, saingy mamorona vaovao hafa indray izy ary manohy ny fihetsiny mihoa-pefy.
Manamarika mpiserasera manokana amin'ny Fanjohiana fanondroana (fantatra amin'ny hoe IDコール na Antso mari-panondroana), fa tsy amin'ny lahatsoratra bilaogy na tsoratadidy (mari-pitadidiana) ny ao amin'ny sehatra Hatena. Isaky ny misy mpiserasera voatondro, dia mahazo fampandrenesana izy ireo.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaoginy, nanamarika i Okamoto fa bilaogera iray hafa ao amin'ny tranonkala famahanam-bilaogy tsy mila manonona anarana ao amin'ny Hatena, AnonymousDiary no naharaka fa fanjohiana fanondroana Hatena 200 farafahakeliny no noforonin'i Matsumoto teo anelanelan'ny taona 2016 ka hatramin'ny taona 2018.
Nanamarika ihany koa i Okamoto fa nanomboka nahita sy namafa ireo kaonty vaovaon'i Matsumoto haingana ny Hatena, angamba noho ireo mpiserasera hafa nitaraina ny momba azy. Nilaza ihany koa i Okamoto fa tokony hahomby amin'ny fiatrehana ity fandotoana rindrina ity ny Hatena:
Mikasa hitory an'i Teino Sensei noho ny fitsabahana amin'ny raharahan'izy ireo ny Hatena. Ary raha somary zatra ity karazana mpandoto rindrina ity sy tsy manana olana amin'izany aho, lasa matahotra kosa ny ankamaroan'ny olona niatrika tampoka ity karazana fihoaram-pefy ity.
Taorian'ny fanafihana, nikatona nandritra ny roa andro ny Fukuoka Growth Next mba hanavao sy hanatsara ny fiarovana ny toerany, araka ny lahatsoratra Facebook izay naneho fiarahamiory tamin'ny fianakavian'i Okamoto.
Niteraka valinteny mafonja antserasera ny toe-draharaha. Sioka iray, nozaraina an'arivony, nilaza fa tsy teo amin'i Hagex sy Teino Sensei manokana ny fifandirana:
Tiako ny olona mba hitsahatra hilaza fa i Hagex tenany ihany no niditra tamin'ny ady mamaivay (nifanaovana tamin'i Teino). Mpandoto rindrina efa hatry ny ela i Teino, ary nanao fanehoan-kevitra adala, feno fankahalana tamin'ny olona manodidina azy, ka nahazoany ny anaram-bositra (Atoa Adala). I Hagex no hany olona nanara-maso tamim-pivitrihana azy (tamin'ity fandotoana rindrina ity) sy niezaka nanao zavatra momba izany.
Hatramin'i'zao, nogadraina noho ny ahiahy famonoana olona i Matsumoto. Ho voampanga izy aorian'ny famotorana voalohany izay mety haharitra herinandro maromaro.